Wefdi ballaran uu hogaaminayo mudane Xaaji Yuusuf Baxlaal ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho
Buluugleey, December 16, 2005
Mud.Xaaji Yuusuf Baxlaal oo wakiil ka ah wadamada Carabta ayaa waxaa laga soo xigaty in uu taageersanyahay madaxweyne Cabdinuur Axmed Darmnaan. Wuxuu xaajigu ku tilmaamay in mudane Cabdinuur yahay siyaasi aqoon iyo aragti siyaasadeed leh ahna wadani wadanka Soomaaliya nabad iyo horumar u horseedi karo.
Wefdiga ayaa ka kala socday wadamada Urdun, Lubnaan, Canada, iyo Australiya, waxayna soo gaareen magaalo madaxda Muqdisho waxaana si diiran u soo dhaweeyey Mudane Cabdinuur Darmaan.
Ujeedada socdaalka wafdigaas lixaadka leh ayaa Xaaji Yusuf ku timaamay inuu yahay mid wax wadaqabsi iyo dib u dhiska dalka Soomaaliya. Waxaana la filayaa in dhawaan Soomaaliya laga furo Banggi Caalami ah ee kala soodsiiyo ganacsiga dalka iyo dibeddaba.
Waxaa la rajeynayaa in fursadaan wax ku oolka ah uu mudane Cabdinuur Darmaan kaalin weyn ka qaato, maadaama ay umada Soomaaliyeed in kabadan 14 sanadood dowlad la’aani tahay. Mudane Cabdinuur ayaa ayaa la filayaa inuu warsaxaafadeed qaban doono hadii uu dhamaado kulamada uu la leeyahay wefdiga ka socda afarta dal ee iskugu jira dalal Carbeed iyo kuwa reer galbeed ah. Waxaa durbadiiba soo baxaya rajooyin ah in hogaanka siyaasadeed ee mudane Cabdinuur darmaan yahay mid muuqada oo aan cidna loodin Karin.